Ukuhlala okumangalisayo - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMarlon
Abahlali abaninzi besiXeko soManyano banobubele kwaye bangabamkeli abalungileyo kubantu abangabaziyo abalungileyo, ngelishwa hayi uSodolophu wethu. Siyakumema ukuba uze konwaba kwisixeko sethu esikhuselekileyo, hayi kuSodolophu wethu kuphela.
Indawo yam yenza wonke umntu azive esekhaya.
Ikhaya lam alikho eManhattan, lingaphantsi kweemayile ezi-4 ukuya kwiSiteshi seBhasi seSigqeba esise-42nd Street kunye ne-8th Avenue eManhattan.
Enkosi ngokwamkela ubuhlobo bam.
Enkosi ngokwamkela isimemo sam sokuza kuhlala kwikhaya lam usuku olunye nangaphezulu.
Nabani na ongumntu olungileyo sele evunyiwe qhubeka nje ubhukishe ukuze ndihlale ndisekhaya.
Ulwazi olulandelayo luya kusinceda sobabini.
Ikhaya lam AYIYOHOTELE, likhaya elithobekileyo elicocekileyo, i-AIRBNB ayingomnini, i-airbnb app njengezinye i-apps isinceda sidibane kakuhle kakhulu; )
Indawo yam yeyomntu kwaye ayiyoyesodolophu weUnion City.
Khetha isikhululo seenqwelomoya saseNewark esikumgama oziikhilomitha ezili-15 kuphela ukuya kwiSiteshi seBhasi esiGunyaziweyo eManhattan kwisitrato sama-42.
Ikhaya lam likwiikhilomitha ezili-11 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNewark.
Ikhaya lam liphakathi kwesikhululo seenqwelomoya saseNewark kunye neManhattan.
Uber osuka eNewark aiport ukuya ekhayeni lam malunga nemizuzu engama-20 ($25), iteksi emthubi malunga ne-$45.
Ukuza ekhaya kwaye uye kwi-Times Square: kwi-Port Authority Bus Terminal uthenge amatikiti kwi-Bus Route 123 (i-$ 3.50 ngomntu ngamnye amatikiti angama-10 nge-$ 30). Thatha le bhasi iibhloko ezi-2 ukusuka ekhayeni lam ukuze ubuye ngamaxesha isikwere kwimizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ngokuxhomekeke kwitrafikhi.
Zininzi ezinye iindlela zebhasi ukusuka apha ukuya eManhattan.
Indawo yam kunye nendawo endikuyo AKUFANELEKILEYO kumntu wonke nceda uqiniseke ukuba ifanelekile kuwe ngaphambi kokuba uyibhukishe.
I-NYC iyangxola kwaye igcwele, iSixeko saseManyano sincinci kakhulu.
Izakhiwo zethu zikufutshane, izakhiwo zesakhelo se-multilevel, izandi ezivela kwamanye amagumbi, amanzi / ukufudumeza / i-Air conditioners iyavakala.
Andinikezeli indawo yokupaka. Kukho iindawo zokupaka ezikufutshane malunga ne- $10 ngobusuku. Umasipala weSixeko sase-Union unokukunika intlawulo yokupaka esitratweni ngaphandle kwemvume yokuhlala.
Ubhukisha igumbi elinye labucala kuphela hayi yonke indawo. Kukho igumbi lokulala elingaphezulu kwelinye.
Uza kundibona kunye nezinye iindwendwe kwiflethi yakho.
Akukho mntu uya kuphazamisa ngabom ubumfihlo bakho.
Uzakuba nezitshixo zendlu yam ungene uphume nanini na.
Igumbi lokulala libandakanya: iibhedi ezi-2 ezinobukhulu obungamawele, iilinen zebhedi ezicocekileyo, iitawuli (zitshintshwa qho ngeentsuku ezi-3 ukuba uyabuza), isomisi seenwele, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko, amanzi ashushu nabandayo, umbane oyi-120v, i-wifi eyomeleleyo, ukufudumeza nge-1 ka-Okthobha ukuya kuMeyi. Eyokuqala kunye ne-air conditioner unyaka wonke. Umbono ovela kwifestile yokulala yezakhiwo ezijikelezileyo.
Amagumbi okuhlambela aneqhaga labucala asecaleni kwamagumbi okulala kodwa angaphandle amagumbi kwesi sakhiwo.
Isidlo sakusasa kunye nekhitshi aliqukwanga ekubhukishini kwakho kodwa njengembeko ungasebenzisa ikhitshi kwaye ukonwabele nakuphi na ukutya endinako, izinto zesidlo sakusasa, ubisi, amaqanda, iziselo, isonka, izisasazeko, njl.
Kwimeko yongxamiseko: Ndiza kukulanda emotweni yam kwiindawo okanye ndikuse kwiindawo zaseNew Jersey ekungemizuzu engama-30 ukusuka ekhayeni lam kwaye ndikuncede ukuba kukhuselekile kuwe nakum ukuba senjenjalo.
Igama lam ndinguMarlon Vite kwaye ndikholelwa ukuba ndiyinyani intsingiselo yoMmeli weSixeko soManyano. Ndiyawuthanda umzi wam. Abantu basemzini abalungileyo bayasityelela.
Ndimema bonke abasemzini abalungileyo, ukuba baqhubeke beza kuhlala kwelam ikhaya, isixeko, kwindawo yam yokuhlala, njengosapho kunye nomhlobo owenza usapho lwam, izinyanya zakowethu, umzi wakowethu kunye nam ndilufanele ukundwendwelwa nguwe, ndize ndichithe usuku olunye okanye kangangoko unako kweli khaya lihloniphekileyo lobuhlobo.
Ikhaya lam likhaya lakho apho wena, abantu obathandayo kunye nempahla yakho ukhuselwe, uhlonitshwe kwaye ukhathalelwe ngokungathi ulusapho lwam.
Ndingumnikazi wesakhiwo esisemthethweni sokuhlala ukusukela ngo-2003, ndirenta amagumbi ama-2 ixesha elide kubantu endingabaziyo, ndingatshatanga kwaye ndihlala kwenye ukuba amagumbi.
Ndivumela abaqeshi bam bexesha elide aba-2 ukuba bamkele iindwendwe/usapho kumagumbi abo kwaye nokuba iindwendwe zabo zibanika iimpahla ngokutshintshiselana ngokuhlala kumagumbi abo ayiloshishini lamntu nangona naziphi na iindwendwe ezongezelelweyo kwisakhiwo sam zimele iindleko ezongezelelekileyo kumatyala aluncedo kwisakhiwo sam. .
Andiwaqeshisi amagumbi kuba ngulo Sodolophu weSixeko soManyano yedwa uye wamisela irenti yexesha elifutshane (ngaphantsi kweentsuku ezingama-30) iSalelo. Ndiyakholelwa ukuba inye kuphela ihotele encinci apha kwisiXeko soManyano endingaqinisekanga ukuba isifanele isiXeko soManyano okanye wena.
Umnikelo wakho oyimali kum ayiyontlawulo yokuhlala ekhayeni lam kwaye awunyanzelekanga ukuba uhlawule ukuhlala kwindawo yam okanye kwikhaya labucala, umnikelo wakho ovunyelwene ngawo ngowokuzithandela awubuyiswa nje ukuba ungene kwaye ndiyabulela ngako.
Umnikelo wakho wokuzithandela kum undigcina ndimema abahlobo abatsha kwikhaya lam labucala.
Ukuba ubunokuhlawulela ukuhlala kwam kwakuza kufuneka imali yakho ndiyinike umasipala we-Union City kwaye bathi bazakubuyisela kuwe kuba usodolophu we-Union City engathandi, engathandi abantu abangabaziyo njenge-UEZ (Urban) yethu. Indawo yoShishino) kwaye ndiyayenza.
Ukukhuthaza abantu ongabaziyo ukuba bandwendwele, i-UEZ yethu ide yanciphisa irhafu yokuthengisa ukuya kwi-3%.
Iindawo zethu zembali nazo ziya kuluthanda utyelelo lwakho, izitalato zethu zibonisa iinkcazo zabantu abaninzi abavela kwezinye iindawo abenze iUnion City yaba nebhongo.
Lo sodolophu wobuzwe ufumene kwakhona ndicinga izigidi zeerandi kwiminikelo yokuzithandela evela kubantu abangabaziyo kodwa njengoFidel Castro unyanzelisa ngokungekho mthethweni kumakhaya abucala abanye abantu kuba akawazi umahluko omkhulu wezindlu zoluntu kunye nezakhiwo zabucala. Umthetho wakhe omiselweyo ucalula abantu abangatshatanga abangakwaziyo ukuthenga indlu yonke, ucalula ngokungenazintloni kuzo zonke iiklasi ezikhuselweyo ezibandakanya abantu abangabaziyo kunye nezizwe zangaphandle kunye nezasekhaya. Ukuba umntu akathathi cala kwintswela-bulungisa ukhethe icala lomcinezeli.
Ukusingatha amakhaya akumele kusetyenziswe njengesixhobo senzuzo yezopolitiko/ulawulo lwezindlu kunye noxinzelelo olusemthethweni lwe-Rico lwezoqoqosho kubantu kunye namakhaya abo abucala ngabantu okanye amaqumrhu afana nalo masipala okanye ngabantu “abaqhelekileyo” abanyuliweyo okanye abaqeshwe ukuba balawule umbutho kamasipala wethu.
Umnikelo wakho wemali wokuzithandela kum uyandinceda ukuba ndihlawule irhafu yepropathi yesixeko sam (kwanakwisikolo sikarhulumente sabantwana abangengabo abam njlnjl), imali-mboleko yam yendlu, i-inshurensi yendlu yam, amatyala am ombane wamanzi ashushu-umbane, enye ipropathi. amatyala esondlo. Iyandinceda ukuba ndihlawule ikholeji yonyana wam kunye namanye amatyala omntu. Iirhafu zam zonyaka zikamasipala zimalunga ne-$11,000 yeedola.
Lo sodolophu uye wayivala i-Airbnb xa u-Airbnb esinceda nje thina nawe sidibane njengoko zisenza ezinye izicelo kwimidiya yoluntu. Isixa esithunyelwe ngu-Airbnb ngumnikelo wakho ekuvunyelwene ngawo oya kundinceda ndihlawule zonke iindleko ezinxulumene noko ngasentla kwaye ukuze ndiqhubeke ndikonwabela ukufumana iindwendwe eziphambili kwindawo yam yekhaya nakwindawo yabucala.
Umthetho kasodolophu uBrian Stack ochasene ne-airbnb ngu "hostis humani generis" ngesiLatini okanye "utshaba lwengqondo" ngobukhulu okanye umlinganiselo. Umthetho we-BS ochasene ne-airbnb naye nawuphi na umhloli, umfazi wamapolisa/indoda, umfazi womthetho/indoda okanye umsebenzi kamasipala ngokwenene bathabatha inxalenye yolu calucalulo yaye ngaloo ndlela bangabacinezeli ngenxa yenzuzo yabo yezopolitiko, ukunyanzeliswa kwevoti kunye, nokugcinwa kwemisebenzi yoluntu ...... .. Andikhe ndivotele lo sodolophu kuba uyalela njengenkosi kuthi banini-mhlaba abambalwa nabanini bamakhaya. Isitaki siphatha ipropathi yabucala ngokungathi yeyakhe okanye njengeyeyoluntu. ....... Akukho ntlonipho kwipropathi yabucala njengoFidel Castro.
Enkosi ngokwamkela isimemo sam sokuhlala kwikhaya lam nakwisixeko sam.
4.97 · Izimvo eziyi-254
Yindawo entle yokuhlala apha.
Le ndawo bendinayo ukusukela ngo-2003
Iindawo zethu zembali ziya kukuthanda utyelelo lwakho ngelixa uDeliciously Wilder, Majestic kwaye uhlala eNqubileyo ye-NYC ikulindile nawe.
Umbuki zindwendwe ngu- Marlon
Nokuba iindwendwe zam ngabafundi bamanye amazwe, abakhenkethi abandwendwela isiXeko saseNew York, abatyali-mali-abantu bamashishini, usapho okanye abahlobo, ndiyayonwabela intetho nabo bonke kwaye ndonwabela ukuzola kwabo bakhetha ngenye indlela.
Nokuba iindwendwe zam ngabafundi bamanye amazwe, abakhenkethi abandwendwela isiXeko saseNew York, abatyali-mali-abantu bamashishini, usapho okanye abahlobo, ndiyayonwabela intetho…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$149
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Union City